February 5, 2021 – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on February 5, 2021 Author admin	Comments Off on ဦးဆုံးအထိအတွေ့
Posted on February 5, 2021 Author admin	Comments Off on ခေတ်ရဲ့သမီးပျို
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ ဆောင်းတွင်း .။ ခြံထဲမှာ မင်းလတ် ကင်းတာဝန်ကျနေသည် ။ ညဥ့်နက်လာလေ အေးလာလေမို့ မင်းလတ်ဂျာကင်ကို လည်ပင်းအထိ ဇစ်ဆွဲတင်လိုက်သည် ။ သေနတ်ကို ဘယ်လက်နဲ့ ပိုက်ထားရင်း ညာလက်နဲ့ အပြာရင့်ရောင် တောဆောင်းဦးထုပ်ကို ရှေ့ကိုငိုက်ငိုက် ဆွဲချသည် ။ အိမ်ကြီးဆင်ဝင်အောက်မှာ သူရပ်နေရင်း မနေ့က ညဈေးတန်းမှာ တွေ့လိုက်တဲ့ ကောင်မလေးအကြောင်း တွေးနေသည် ။ တော်တော်ချောတဲ့ ကောင်မလေး ။ အသားဖြူလွန်းတဲ့ အဲဒီကောင်မလေးရဲ့ ပါးပြင်လေးတွေက အေးလွန်းနေတဲ့ ရှမ်းပြည်ဆောင်းကြောင့် နီရဲတွတ်နေကြသည် ။ ပအို့မလေးလား . .ရှမ်းမလေးလား ။မနေ့ညက မင်းလတ် မြင်မြင်ချင်း ဒီကောင်မလေးကို ကြိုက်သွားသည် ။ တာဝန်နဲ့သာ မဟုတ်ရင် ကောင်မလေးနောက်ကို လိုက်မိမှာ သေချာသည် […]
Posted on February 5, 2021 Author admin	Comments Off on ပြန်ကော့ကော့ပေးနေသည်
ကောင်းကင်မှ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် ကြယ်များကိုကြည့်ရင်း ငြီးငွေ့စရာ ကောင်းလှသော ပင်လယ်ပြင်ကြီးအား နောက်ထပ် ခြောက်ရက်ခန့်မျှ သူစီးရဦးပေတော့မည် ယခုတာဝန်အားပေစေသော ရဲချုပ်ကြီးအား မင်းမင်း တယောက် စိတ်ထဲမှ ကြိမ်ဆဲနေမိတော့သည် သူ ရဲထဲဝင်ခဲ့သည်မှာ ဖာ များ မာဆက်မှဆော်များအား အမြဲမပြတ်လိုးရန်အတွက်ပင်ဖြစ်သည် သူလိုးခဲ့တဲ့ ဆော်တိုင်းလည်းသူအားအစွဲကြီးစွဲလမ်းသွားကြသည် စွဲသွားအောင်လည်း လိုးနည်းပေါင်စုံ သူကျွမ်းကျင်သည်မဟုတ်ပါလား သူ့အရပ်မောင်းမှာ ခြောက်ပေရှိကာ အားကစားလိုက်စားသောကြောင့် ရင်အုပ်ကြယ်ကာ ယေက်ျားပီသကာ အသားရည်မှာလည်း မညိုသော်လည်း ဖြူသည့်ဘက်မပါချေ အထူးခြားဆုံးက ခွန်နှစ် လက်မခန့်ရှည်သော သူ့လီးပင် လုံးပတ်မှာ လက်မနှင့် လက်ခလယ်ပင် မထိချင်။ ထိုမျှကောင်းလွန်းသော သူ့လီးအား ခံဖူသူတိုင်းစွဲလမ်းသွာတာ မဆန်းပေ အခုရက်ပိုင်း အလုပ်တွေရှုပ်နေသောကြောင့် မလိုးရသည်မှာ ကြာခဲ့ချေပြီ ယခုလည်း ဆရာသမား သမီးချော နှစ် […]
Posted on February 5, 2021 Author admin	Comments Off on ပြီးဆုံးခြင်းအဆုံးသတ်
အလုပ်မရှိ လက်ယားလက်ယား လုပ်နေတဲ့အချိန် . ကျနော်တို့ အိမ်ဘေးက ကိုစိုးမင်းက နိုင်ငံခြားသွားတဲ့ သူတွေကို ပို့ပေးတဲ့ ပွဲစားပါ ။ ကိုစိုးမင်းက သူတယောက်ထဲ အလုပ်များလို့ အားရင် ဝင်ကူပါဆိုတော့ ကျနော်လဲအားနာလို့ ကိုစိုးမင်းအလုပ်တွေကို ဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေတာပေါ့ ကိုစိုးမင်းတို့အိမ်မှာ အန်တီနု ဆိုတဲ့ သူ့အဒေါ် အပျိုကြီး တစ်ယောက်ရှိပါတယ် . ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် တော်တော်တောင့်တယ်ဗျ နို့ကြီးက အကြီးကြီး ဖင်ကြီးကလဲ အယ်နေတာပဲဗျာ ….။ အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင် ကိုစိုးမင်းကို ကျနော် အလုပ်ကူလုပ်ပေးတာ အန်တီနု နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် နေချင် လို့ပါ ။ လူပျိုဖြစ်ခါစ ဆိုတော့ ဖင်ကြီးကြီး မိန်းမတွေဆို အရမ်းကြိုက်ဗျ ။ ဒီလိုနဲ့ ကိုစိုးမင်းကို ကူလုပ်ရင်း အန်တီနု ကို […]
Posted on February 5, 2021 Author admin	Comments Off on မဝသေးဘူးတဲ့
အန်တီမာ ဆိုတာ အမေ့ကျောင်းတုန်းကသူငယ်ချင်းပြီး အမေ့ထက် အသက် နှစ် နှစ် ပိုကြီးပါ တယ် ကလေး နှစ် ယောက်အမေ ဖြစ်ပြီး ခန္ခာကိုယ်လုံးက အမေ့ထက်ပိုထွားပါတယ် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပြီး ရာထူးအတွက် သင်တန်းတက်ရတဲ့အတွက် တစ်လကျော် အိမ်မှာ အတူလာနေသွားဖူးတဲ့သူပါ အရင်ကလဲ အိမ်အဝင်အထွက်ရှိဖူးထားတော့ ကျွန်တော်နဲ့လဲ သိနေပြီးသားဖြစ်သလို ကျွန်တော်ကိုလဲ သား တစ်ယောက်လို သဘောထားပုံရပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ သူ့သားက ရွယ်တူပါ အမေ က ငါ့သားနဲ့ နင့်သမီးကိုပေးစားမယ်လို့ အမြဲ စနောက်တက်ပါတယ် အန်တီမာ ကအေးအေးနေတက်ပုံရပြီး တောဘက်ဇာတိကဆိုတော့ ရိုးအေးပုံရှိတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ပါအိမ်မှာ အန်တီမာ လာနေတဲ့အချိန်က ကျွန်တော်ကလူပျိုဖြစ်ပြီးစအရွယ်ဖြစ်တော့ ဂွင်းစထုလို့ အားထက်သန်နေတဲ့အချိန်မျိုးပါ တခါအမှတ်တမဲ့ အန်တီမာရေချိုးနေတာကို ထမင်းစားခန်းမှာထမင်းစားနေရင်း မြင်ဖူးလိုက်ထဲကစပြီး။ နောက်ရက်တွေမှာ အန်တီမာရေချိုးတာကို စောင့်ပြီး […]
Posted on February 5, 2021 Author admin	Comments Off on အခွင့်ရေးပေးလျှင်
Posted on February 5, 2021 Author admin	Comments Off on ငံ့လင့်နေသည်မှာကြာပြီ
ခင်သက်ထားသည်စိတ်စောနေသဖြင့် ဖာသည်မဆန်ဆန် ဦးဘ၏ပြော့ခွေနေသောလီးကြီးကို သူ၏လက်ချောင်းသွယ်သွယ်လေးများဖြင့်ဆွပေးနေရာ မကြာမီမာကြောတောင့်တင်းလာ၏။ မတောင်မီက ကြက်တက်လေးလောက်ရှိသော်လည်း တောင်လာသောအခါ ခရမ်းသီးအလတ်စားနီးနီးကြီးထွားလာပြီးလျှင် အရှည်ငါးလက်မခွဲခန့်ရှိလေသည်။ ခင်သက်ထားခြင်ထောင်သံပါပါညု၍ တိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်။ ‘‘ ဟီဟိ ဘဘကြီး ခလေးမွေးအောင်လုပ်နိုင်လို့လား ’’ ‘‘ ညားတော့သိရမှာပေါ့ကွာ ’’ ‘‘ သိနေတာပဲ ဘဘကြီးဟာက ထလဲမထ သေးလဲသေးနဲ့ မြန်မြန်လုပ်ပါ ဟိုမှာ လူမမာတယောက်လုံးပစ်ထားခဲ့ရတာ ဘဘကြီးရဲ့ ’’ လုံးပတ်ကြီးပေမဲ့ ဟာမက်၊ လီလျောင်တန်၊ ကျော်မိုးတို့လောက်တော့မရှည်။ တိုလျှင်တုတ် သေးလျှင်ရှည်ပါစေဟု မိန်းမတို့ဆုတောင်းပြည့် လီးပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါ၏။ ‘‘ လာတော့လဲ ဘဘကြီးဟာကကြီးသားနော် ’’ ခင်သက်ထားကပေါင်နှစ်လုံးကိုကားပေးလိုက်ပြီးလျှင် ဆောက်ရည်ကြည်များရွမှ်းနေသည့် ဆောက်ပတ်ထဲလီးမြုပ်အောင်ဆွဲထည့်ပေးလိုက်သည်။ ‘‘ မကြီးပါဘူးကွဲ့ ခံကြည့်တော့သိမှာပေါ့ ’’ ဦးဘကြည်သည် အသင့်ထည့်ပေးထားသော သူ၏လီးကြီးကို တဝက်မျှဝင်အောင်ထိုးသွင်းလိုက်ပြီးလျှင် နို့နှစ်လုံးကိုဆွဲ၍ တချက်ချင်းမျှင်းဆောင့်၏။ […]
Posted on February 5, 2021 Author admin	Comments Off on စိတ်ကြိုက်ဆောင့်စမ်းပါ